प्रचण्डले लगाए महासचिवको टुङ्गो लामो रस्साकस्सीपछि, अब दायाँबायाँ नहुने !
ञआठौँ महाधिवेशन (११–१८ पुस) बाट माओवादी केन्द्रको पहिलो निर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकको पहिलो निर्णय थियो, अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को चयन।
पुस २१, २०७८ १:०३
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो रस्साकस्सीपछि महासचिवको लगभग टुंगो लागेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउने पक्कापक्की भएको हो ।
प्रचण्डकै उचाईका कुनै सशक्त प्रतिद्वन्द्वी पार्टीभित्र नदेखिएपछि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष फेरिपनि प्रचण्ड नै बन्छन् भन्ने धेरै अघि नै पक्का थियो। त्यसैले, केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकप्रति मानिसहरुको चासो महाधिवेशनपछि माओवादी केन्द्रको महासचिवमा प्रचण्डले कसको नाम प्रस्ताव गर्लान् भन्ने थियो।
आफुले चाहेको नाम प्रचण्डले प्रस्ताव गर्दा कसैले विमति जनाउने सम्भावना कम थियो। कुनै आकांक्षीले विमति जनायो भनेपनि निर्वाचन हुन्थ्यो। त्यस्तोमा, प्रचण्डले प्रस्ताव गरिसकेको नेताले नै महासचिवमा विजय हासिल गर्नेपनि पक्का नै थियो।
यसो गर्दा संगठनमा प्रचण्डकै पकड रहेछ भन्ने कुरा आन्तरिक निर्वाचनको माध्यमबाटै पुष्टि हुन्थ्यो। पदाधिकारी समूहलाई ‘टीके टिम’ बनाएको आरोपबाट प्रचण्डले पनि मुक्ति पाउँथे।
तर, आठौँ महाधिवेशनपछिको पहिलो केन्द्रीय समितिबाट आफु अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले अन्य पदाधिकारीको नाम नै प्रस्ताव गरेनन्, बहुप्रतिक्षित महासचिवको नामपनि प्रस्तुत भएन।
बरु, प्रचण्ड अध्यक्ष निर्वाचित भएलगत्तै बैठक २५ पुससम्मका लागि स्थगित भयो। ‘पार्टीका दुईजना नेताहरु बर्षमान पुन र ओनसरी घर्ति उपचारका लागि चीनमा हुनुहुन्छ’, बैठकपछि पत्रकारहरुलाई प्रचण्डले स्पष्टिकरण दिए, ‘उहाँहरु आएपछि नै पदाधिकारी चयन गरौँ भनेर २५ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।’
प्रचण्डले भनेजस्तै, आठौँ महाधिवेशनअघि पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रहेका पुन उपचारका क्रममा यतिबेला चीनमा छन्। गम्भीर प्रकारको जण्डिस रोगका कारण उपचारका लागि १३ असोजमा ब्याङ्कक पुगेका उनी १० मंसिरमा चीनको सेन्जेनस्थित थर्ड पिपुल्स हस्पिटल अफ सेन्जेन पुगेका थिए।
नेता पुन मंगलबार (२० पुस) मा मात्र डिस्चार्ज भएका छन्। उनी तीन दिनपछि काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ। काठमाडौँ आएपछि उनीपनि उपस्थित हुने गरी २५ पुसका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गरिएको छ।
आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने महासचिवका एक दावेदार थिए पुन। गत साउनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पुन केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था सहित त्यसको इञ्चार्ज बनाएपछि पुनलाई माओवादी केन्द्रको भावी महासचिवको रुपमा हेर्न थालिएको हो।
महासचिवका अर्का दावेदार जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी पाएको संगठन विभागपनि पुन मातहतको केन्द्रीय सचिवालय अन्तर्गत नै राखिएकाले पनि पुनलाई महासचिवका सबैभन्दा सशक्त बलिया दावेदार मान्न थालियो।
तर जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म निरन्तर प्रचण्डले भरोशा र विश्वास गरेका पुन गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका कारण महाधिवेशनमा उपस्थित हुन सकेनन्। पूर्व सभामुखसमेत रहेकी माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तिमगरपनि पति पुनको हेरचारका लागि चीनमै भएकाले महाधिवेशनमा सहभागी हुन सकिनन्।
त्यसपछि सम्भावित महासचिवका रुपमा जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल चर्चामा रहे। पुन महाधिवेशन हलमा उपस्थित भएको भए सम्भवतः महासचिवका लागि यति धेरै नेताको नाम चर्चामा आउने थिएन।
केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीका भनाईमा, बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भनेजस्तै, केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रचण्डले नेता पुन र नेतृ घर्ती चीनबाट फर्केपछि बैठक बोलाएर पदाधिकारी चयन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए।
पुन नै उपस्थित बैठकबाट महासचिव लगायतका पदाधिकारी चयन गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावसँगै बैठक स्थगित भएपछि प्रश्न उठेको छ– के पुनलाई नै महासचिव बनाउन प्रचण्डले २५ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्?
माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ नेता दीनानाथ शर्मा प्रचण्ड कसलाई महासचिव बनाउने पक्षमा छन् भन्ने कुरा अझै यकिन गर्न नसकिने बताउँछन्। तर, उनको भनाईमा, १९ पुसको पहिलो बैठक स्थगित हुनुको कारण पुनलाई नै महासचिव बनाउनका लागि चाहिँ होइन।
७५ वर्ष उमेर नाघिसकेका शर्माले उमेरका दृष्टिले सबैभन्दा बरिष्ठ भएकाले महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। त्यसपूर्व नै बैठकबारे निर्णय गर्न प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा लगायतका नेताहरुसँग शर्माको कुराकानी भएको थियो।
‘बैठक सुरु हुनुअघि अध्यक्ष प्रचण्डसँगको फोन–कुराकानीमा अनन्तले ‘महाधिवेशन पछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफुपनि उपस्थित हुने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको रहेछ’, नेता शर्माले भने, ‘महाधिवेशनपछिको पहिलो बैठक महाधिवेशनकै निरन्तरता सरह हुने भएकाले उहाँ (नेता पुन र नेतृ घर्ती) को पनि सहभागिता होस् भनेर पहिलो बैठककै निरन्तरताका रुपमा २५ पुससम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो।’
शर्मासँगको कुराकानीमा प्रचण्डले विधानले व्यवस्था गरेका अन्य पदाधिकारीमा पनि गृहकार्य नसकिएका कारण पनि १९ पुसको बैठकबाट सबै निर्णय गर्न नसकिने र गृहकार्यका लागि केही दिन बैठक सार्नुपर्ने बताएका थिए।
निश्चय नै, तीन दिनका लागि आयोजना गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा परिणत भई ७ दिनसम्म लम्बिएकाले प्रचण्ड समयको दवावमा थिए।
महाधिवेशन सकिएलगत्तै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार तय गर्नुमात्र थिएन, सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरी भागवण्डा समेत मिलाउनुपर्ने बाध्यतापनि थियो।
यसै अनुसार महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्टै १९ पुस विहान सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्यो। त्यही बैठकबाट सत्तारुढ गठबन्धनका पाँच दलहरुले राष्ट्रिय सभाका रिक्त १८ स्थानमा भागबण्डा गरे। लगत्तै प्रचण्ड केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा सहभागी भए।
सत्तारुढ दलहरुको बैठक अघि राष्ट्रिय सभामा पार्टीले रिक्त कुन–कुन सिट लिने भनेर आफ्नै पार्टीभित्र पनि छलफल गर्न जरुरी थियो। यसका लागि उनी १९ पुस विहानै पार्टीका नेताहरुसँग छलफलमा जुटे।
यो परिस्थितिजन्य चटारो हेर्दा १९ पुसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्न प्रचण्डसँग समय अभाव थियो वा गृहकार्य पुगेको थिएन भन्ने कुरामा अविश्वास गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन।
तर, बैठक पुस २५ सम्म सारिनुको कारण यत्तिमात्र चाहिँ होइन। बैठक सारिनुको मुख्य कारण पुनको उपस्थितिमा नै पदाधिकारी चयनसम्बन्धी निर्णय होस् भनेर हो।
पुनको स्वास्थ्य समस्या कति जटिल थियो भन्ने कुरा माओवादी केन्द्रमा सबैभन्दा बढी जानकारी प्रचण्डलाई नै थियो। ब्याङ्ककमा उपचार सम्भव नभएपछि प्रचण्डकै प्रयासमा उपचारका लागि उनलाई सेन्जेन (चीन) लगिएको थियो।
यस्तो गम्भीर समस्याबाट तङ्ग्रिएर आएको नेताले ‘केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई महाधिवेशनकै निरन्तरता मानौँ, त्यो बैठकमा मपनि उपस्थित हुन्छु, त्यसबाट मैलेपनि महाधिवेशनमा सहभागिता जनाए सरह हुन्छ’ भन्दा प्रचण्डले अस्वीकार गर्नु मानवीय र राजनीतिक दुबै कारणले गलत हुन्थ्यो।
त्यसमाथि पुन महासचिवका सशक्त दावेदार हुन्। आफ्ना विश्वासपात्र मध्येका एक र जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका कारण महाधिवेशन हलमा उपस्थित हुन नपाएका पुनको अनुपस्थितिमा यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु प्रचण्डले उपयुक्त सम्झेनन्।
जानकारी अनुसार, मंगलबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका पुन तीन दिनपछि काठमाडौँ आइपुग्दैछन्। अन्य कुनै कारणबाट अवरोध सिर्जना नभएमा उनी २४ पुसभित्रमा काठमाडौँ आइसकेका हुनेछन्। पुनको आगमनको चर्चासँगै माओवादी पंक्तिभित्र फेरि भावी महासचिवका रुपमा उनकै चर्चा बढेको छ।
‘पुन र शर्माबाहेक महासचिवका लागि अरु नाममा चर्चा भएको पुन महाधिवेशनका बेला चीनमा रहेकाले मात्र हो’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘२५ पुसमा हुने बैठकमा पुन उपस्थित हुने भएपछि अब महासचिवमा पुनकै सम्भावना बढेको छ।’
ती नेताले थपे, ‘पुनलाई महासचिव नबनाउने हो भने उपाध्यक्ष बनाएर पहिलो बैठकबाटै महासचिवमा अर्कै नेताको नाम प्रस्ताव हुन्थ्यो होला। पुन आगमनका लागि पर्खाई हेर्दा उनैलाई महासचिव बनाउन हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।’